မောင်းသူမဲ့ကားများနှင့် အနာဂတ်၏လောင်စာဆီ ကျပ်တည်းမှုပြဿနာ | CarsDB
မောင်းသူမဲ့ကားများနှင့် အနာဂတ်၏လောင်စာဆီ ကျပ်တည်းမှုပြဿနာ
ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် မောင်းသူမဲ့ကား (driverless cars) တွေဟာ ဒီနေ့ခေတ်ကားဝါသနာအိုးတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ Google တို့လို နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်း အာရုံခံကိရိယာတွေ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေကို အသုံးပြုပြီး မောင်းသူမဲ့ကားတွေ စတင်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်မှာ များများစားစားတွေ့မြင်ရဖို့ရှိနေတဲ့ မောင်းသူမဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနာဂတ်ရေးရာဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေဆီက ထင်မြင်ချက်တွေလည်း အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ မတော်တဆမှုတွေလျော့နည်းသွားဖို့၊ ပါကင်ထိုးစရာနေရာတွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ဖို့၊ ခရီးရှည်ကားမောင်းရတဲ့ပင်ပန်းမှု မခံရစေဖို့ ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုလည်း ကျန်ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ မကြာခင်မှာ ပြတ်လပ်ဖွယ်ရှိနေတဲ့ လောင်စာဆီနဲ့စွမ်းအင်ပြဿနာတွေကို မောင်းသူမဲ့ကားကဖြေရှင်းနိုင်မှာလား ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကမ္ဘာကြီးကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေက ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲလာခြင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာမြေကနေရရှိတဲ့ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ တဖြည်းဖြည်းခမ်းခြောက်ပြတ်တောက်လာနိုင်တာပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ သိပံ္ပနဲ့အင်ဂျင်နီယာသုတေသနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ National Academy of Sciences (NAS) က လာမယ့် ၂၀၅၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာ နိုင်ငံအတွင်းလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မဖြစ်မနေလျှော့ချရလိမ့်မယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ global warming ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ကာကွယ်ဖို့ရယ်၊ တခြားနိုင်ငံရဲ့ လောင်စာဆီတင်သွင်းမှုအပေါ် မှီခိုနေရတဲ့အားနည်းချက်ကို ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ ဒီလိုလောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို လုံးဝနီးပါးလျှော့ချပစ်လိုက်ဖို့ဆိုရင် အမေရိကန်တို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်ဟာ လျှပ်စစ်ကားတွေများများထုတ်လုပ်ဖို့နဲ့ biofuel လို့ခေါ်တဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်ကရတဲ့ လောင်စာဆီကို ပိုမိုသုံးစွဲဖို့ပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒီထွက်ပေါက်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးနည်းပညာတစ်ခုကို NAS က တာဝန်ရှိသူတွေ စူးစမ်းရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ မောင်းသူမဲ့ကားဆိုတာကို သွားပြီးတွေ့ရှိပါတော့တယ်။ လောင်စာဆီအပေါ်မောင်းသူမဲ့ကားတွေ အကျိုးပြု/မပြု ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင် ၂ မျိုးလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မောင်းသူမဲ့ကားတွေဟာ အနာဂတ်မှာလောင်စာဆီနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိစေနိုင်မလဲဆိုတာ ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို မောင်းသူမဲ့ကားက ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပေးမလဲ
မောင်းသူမဲ့ကားတွေဟာ သာမန်ကားနဲ့ယှဉ်ရင် လောင်စာဆီပိုပြီးအသုံးခံမှာသေချာပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့လူသားဒရိုင်ဘာတွေထက်စာရင် ခရီးတစ်ခုကို ပုံသေအရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်နိုင်တာကြောင့်ပါပဲ။ တကယ်လို့လမ်းမပေါ်မှာ လူသားမောင်းတဲ့ကားမပါဘဲ အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ driverless car တွေချည်းသာဆိုရင် ကားအားလုံးဟာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ပုံသေအရှိန်နဲ့ မောင်းနိုင်ကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ ယာဉ်မတော်တဆမှုတို့ဆိုတာတွေလည်း အတိတ်မှာကျန်ခဲ့မှာ အသေအချာပါပဲ။ ယာဉ်မှာပါဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ဟာ လောင်စာဆီအနည်းဆုံးကိုသာသုံးစွဲပြီး အထိရောက်ဆုံးမောင်းနှင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သုတေသီတွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ မောင်းသူမဲ့ကားတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုမယ့်အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းက လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနှုန်းဟာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ကျသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ သာမန်ကားတွေထက် ပိုပြီးပေါ့တဲ့မောင်းသူမဲ့ကားတွေရဲ့ အလေးချိန်ပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်ရဲ့သာမန်ကားတွေဟာ ပေါင် ၄,၀၀၀ လောက်ရှိပေမယ့် ကွန်ပျူတာထ်ိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ မောင်းနှင်မယ့်လျှပ်စစ်ကားတွေကတော့ ပေါင် ၇၅၀ လောက်ပဲလေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အလေးချိန်နည်းလေလေ အင်ဂျင်အရုန်းရသက်သာလေဖြစ်တာကြောင့် လောင်စာဆီလည်းပိုပြီးသက်သာမယ်ဆိုတာ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အာရုံခံစနစ်တွေ၊ ကွန်ပျူတာလမ်းကြောင်းရှာစနစ်တွေကြောင့် ကားပါကင်ထိုးတဲ့နေရာမှာလည်း အရင်ကလို အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒီအားသာချက်ကြောင့်လဲ လောင်စာဆီသုံးစွဲရမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ စစ်တမ်းတစ်ခုအရဆိုရင် ကားအတွင်းမှာပါတဲ့လောင်စာဆီရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကားပါကင်ရှာဖွေရင်း ဖြုန်းတီးပစ်နေကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ မောင်းသူမဲ့ကား
အလိုအလျောက်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့မောင်းသူမဲ့ကားတွေဟာ လမ်းမပေါ်မှာ ဘယ်သူမဆိုငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ စနစ်ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အလုပ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် အိမ်ကကားဂိုဒေါင်ထဲက ကိုယ်ပိုင်ကားကြီးကို ထုတ်မောင်းဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ လိုရင်းကတော့ အနာဂတ်ရဲ့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ယာဉ်ပေါင်းစုံနဲ့ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် လမ်းမပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်သူတွေ၊ စက်ဘီးစီးသူတွေနဲ့ ပိုပြီးစည်စည်ကားကားဖြစ်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့ကားတွေမှာပါဝင်မယ့် ထိန်းချုပ်စနစ်ဟာ လူသားဒရိုင်ဘာတွေထက် ပိုပြီးတိကျပါတယ်။ စနစ်သာတကယ်ကောင်းရင် ယာဉ်တိုက်မှုဆိုတာ ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့လို့ ကလေးငယ်တွေ၊ လမ်းလျှောက်သူတွေနဲ့ စက်ဘီးစီးသူတွေဟာ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ လမ်းမပေါ်ထွက်နိုင်တော့မှာပါ။ ခရီးသွားပြည်သူတွေအားလုံးဟာလည်း လမ်းမပေါ်က မောင်းသူမဲ့ကားတွေကိုသာ အသုံးပြုစီးနင်းရတော့မှာဖြစ်လို့ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုကို ပိုမိုချွေတာပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
မောင်းသူမဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်က သုံးသပ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီတစ်ခါတော့ အနာဂတ်ရဲ့ လောင်စာဆီပြဿနာကို မောင်းသူမဲ့ကားတွေက ပိုပြီးဆိုးရွားလာစေမလားဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိ/မရှိ ဆက်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ ကားမောင်းချင်တဲ့သူတွေဟာ လျော့နည်းမသွားဘဲ တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးတိုးပွားလို့သာလာနေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စည်းကမ်းဥပဒေအရ အသက် ၁၆ နှစ်အောက်လူငယ်တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ မသန်စွမ်းတဲ့ဒုက္ခိတတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေဟာ ကားမောင်းခွင့်မရှိပါဘူး။ မောင်းသူမဲ့ကားတွေ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြရင်တော့ ဒီလူတွေလည်း သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ဒီကားတွေကို တက်စီးနိုင်ကြပါပြီ။ အဲဒီအခါမှာ ကားမောင်းသူ (သို့) ကားစီးသူအရေအတွက်ဟာ လက်ရှိထက်ပိုလို့တောင်များပြားလာမှာ အသေအချာပါပဲ။ ပြည်တွင်းပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဟာလည်း ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအစား မောင်းသူမဲ့ဘတ်စ်ကားတွေ၊ မောင်းသူမဲ့တက္ကဆီတွေကိုသာ မြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါတယ်။ မောင်းနှင်ပို့ဆောင်ပေးရမယ့် self driving car တွေများလာလေလေ၊ လောင်စာဆီလိုအပ်ချက်ကလည်း ပိုပြီးများလာလေလေ ဖြစ်မှာကတော့ သေချာနေပါတယ်။
လမ်းမတွေပေါ်မှာ မောင်းသူမဲ့ကားတွေ ပျားပန်းခပ်အောင်လှုပ်ရှားသွားလာနေပြီး ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအားလုံးရဲ့ ဦးတည်ချက်ဟာလည်း မောင်းသူမဲ့ကားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဒီကားတွေရဲ့သက်တမ်းကိုလည်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုလာပါလိမ့််မယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကားတစ်စီးရဲ့သက်တမ်းကို ၁၁ နှစ်သတ်မှတ်ထားပေမယ့် သုံးစွဲမှုသက်တမ်းကို ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်းသာ သတ်မှတ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါမှသာ လိုက်ပါလိုတဲ့ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ မောင်းသူမဲ့ယာဉ်တစ်စင်းကို စိတ်အေးလက်အေးစီးနင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မောင်းသူမဲ့ကားတစ်စီးဟာ သက်တမ်း ၅ နှစ်ကျော်လွန်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆက်လက်စီးနင်းဖို့မသင့်ဘဲ လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်မှုတွေ၊ နည်းပညာအသစ်နဲ့အညီ အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေ လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒီအခါမှာလည်း လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုပမာဏက ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းဖို့မလွယ်သေးပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ အမေရိကန်က ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ၊ သုတေသီအဖွဲ့အစည်းတွေက အနီးစပ်ဆုံးလေ့လာမှုတွေသုံးပြီး အနာဂတ်အတွက် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ခဲ့တာတွေပါ။ မောင်းသူမဲ့ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဖြေတွေလည်း အမြောက်အများကျန်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့လောင်စာဆီ ပြတ်လပ်မယ့်အန္တရာယ်ကို မောင်းသူမဲ့ကားတွေက အကူအညီပေးမှာလား …? ဒါမှမဟုတ် ပိုပြီးဆိုးရွားလာစေမှာလား ဆိုတာကိုတော့ …။
စာရေးသူ : ကိုဆွဲ (မုံရွာ)
Ref: Will Driverless Cars Solve Our Energy Problems or Just Create New Ones?
ကှနျပြူတာထိနျးခြုပျစနဈနဲ့ မောငျးနှငျနိုငျမယျ့ မောငျးသူမဲ့ကား (driverless cars) တှဟော ဒီနခေ့တျေကားဝါသနာအိုးတှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။ Google တို့လို နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတှကေလညျး အာရုံခံကိရိယာတှေ၊ ကှနျပြူတာပရိုဂရမျတှကေို အသုံးပွုပွီး မောငျးသူမဲ့ကားတှေ စတငျထုတျလုပျလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လာမယျ့နှဈအနညျးငယျမှာ မြားမြားစားစားတှမွေ့ငျရဖို့ရှိနတေဲ့ မောငျးသူမဲ့ကားတှနေဲ့ပတျသကျပွီး အနာဂတျရေးရာဝဖေနျသုံးသပျသူတှဆေီက ထငျမွငျခကျြတှလေညျး အမြိုးမြိုးထှကျပျေါနပေါတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့တော့ မတျောတဆမှုတှလြေော့နညျးသှားဖို့၊ ပါကငျထိုးစရာနရောတှကေို အလှယျတကူရှာဖှနေိုငျဖို့၊ ခရီးရှညျကားမောငျးရတဲ့ပငျပနျးမှု မခံရစဖေို့ ဆိုတဲ့အခကျြတှပေါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အရေးကွီးဆုံးဆိုတဲ့မေးခှနျးတဈခုလညျး ကနျြရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါကတော့ မကွာခငျမှာ ပွတျလပျဖှယျရှိနတေဲ့ လောငျစာဆီနဲ့စှမျးအငျပွဿနာတှကေို မောငျးသူမဲ့ကားကဖွရှေငျးနိုငျမှာလား ဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ။
လာမယျ့ဆယျစုနှဈအနညျးငယျအတှငျး ကမ်ဘာကွီးကွုံတှလေ့ာနိုငျတဲ့ပွဿနာတှကေ ရာသီဥတု ဖောကျပွနျပွောငျးလဲလာခွငျးနဲ့အတူ ကမ်ဘာမွကေနရေရှိတဲ့ စှမျးအငျရငျးမွဈတှေ တဖွညျးဖွညျးခမျးခွောကျပွတျတောကျလာနိုငျတာပါပဲ။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈအနညျးငယျက အမရေိကနျပွညျထောငျစုရဲ့ သိပ်ပံနဲ့အငျဂငျြနီယာသုတသေနအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ National Academy of Sciences (NAS) က လာမယျ့ ၂၀၅၀ ခုနှဈဝနျးကငျြမှာ နိုငျငံအတှငျးလောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ မဖွဈမနလြှေော့ခရြလိမျ့မယျလို့ ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ global warming ဆိုတဲ့ ကမ်ဘာကွီးပူနှေးလာမှုကို ကာကှယျဖို့ရယျ၊ တခွားနိုငျငံရဲ့ လောငျစာဆီတငျသှငျးမှုအပျေါ မှီခိုနရေတဲ့အားနညျးခကျြကို ပွငျဆငျဖို့အတှကျပါပဲ။ ဒီလိုလောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို လုံးဝနီးပါးလြှော့ခပြဈလိုကျဖို့ဆိုရငျ အမရေိကနျတို့ရဲ့ တဈခုတညျးသောထှကျပေါကျဟာ လြှပျစဈကားတှမြေားမြားထုတျလုပျဖို့နဲ့ biofuel လို့ချေါတဲ့ သဘာဝထှကျကုနျကရတဲ့ လောငျစာဆီကို ပိုမိုသုံးစှဲဖို့ပဲ ရှိနပေါတယျ။ ဒီထှကျပေါကျနဲ့ အကိုကျညီဆုံးနညျးပညာတဈခုကို NAS က တာဝနျရှိသူတှေ စူးစမျးရှာဖှလေိုကျတဲ့အခါမှာတော့ မောငျးသူမဲ့ကားဆိုတာကို သှားပွီးတှရှေိ့ပါတော့တယျ။ လောငျစာဆီအပျေါမောငျးသူမဲ့ကားတှေ အကြိုးပွု/မပွု ဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဆနျ့ကငျြဘကျအမွငျ ၂ မြိုးလညျးထှကျပျေါနပေါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ မောငျးသူမဲ့ကားတှဟော အနာဂတျမှာလောငျစာဆီနဲ့ပတျသကျလို့ ဘယျလိုအကြိုးကြေးဇူးတှရေရှိစနေိုငျမလဲဆိုတာ ဆကျပွီးလလေ့ာကွညျ့ကွရအောငျပါ။
လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို မောငျးသူမဲ့ကားက ဘယျလိုထိနျးခြုပျပေးမလဲ
မောငျးသူမဲ့ကားတှဟော သာမနျကားနဲ့ယှဉျရငျ လောငျစာဆီပိုပွီးအသုံးခံမှာသခြောပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ စိတျအပွောငျးအလဲမွနျတဲ့လူသားဒရိုငျဘာတှထေကျစာရငျ ခရီးတဈခုကို ပုံသအေရှိနျနဲ့ မောငျးနှငျနိုငျတာကွောငျ့ပါပဲ။ တကယျလို့လမျးမပျေါမှာ လူသားမောငျးတဲ့ကားမပါဘဲ အလိုအလြောကျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့ driverless car တှခေညျြးသာဆိုရငျ ကားအားလုံးဟာ ကိုယျ့လမျးကိုယျပုံသအေရှိနျနဲ့ မောငျးနိုငျကွမှာပါ။ ဒါဆိုရငျ ယာဉျကွောပိတျဆို့မှု၊ ယာဉျမတျောတဆမှုတို့ဆိုတာတှလေညျး အတိတျမှာကနျြခဲ့မှာ အသအေခြာပါပဲ။ ယာဉျမှာပါဝငျတဲ့ကှနျပြူတာစနဈဟာ လောငျစာဆီအနညျးဆုံးကိုသာသုံးစှဲပွီး အထိရောကျဆုံးမောငျးနှငျပေးပါလိမျ့မယျ။ သုတသေီတှရေဲ့ခနျ့မှနျးခကျြအရ မောငျးသူမဲ့ကားတှေ တှငျတှငျကယျြကယျြအသုံးပွုမယျ့အခြိနျမှာ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျးက လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုနှုနျးဟာ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၃၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိလြော့ကသြှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ နောကျတဈခကျြကတော့ သာမနျကားတှထေကျ ပိုပွီးပေါ့တဲ့မောငျးသူမဲ့ကားတှရေဲ့ အလေးခြိနျပါပဲ။ ယနခေ့တျေရဲ့သာမနျကားတှဟော ပေါငျ ၄,၀၀၀ လောကျရှိပမေယျ့ ကှနျပြူတာထိနျးခြုပျစနဈနဲ့ မောငျးနှငျမယျ့လြှပျစဈကားတှကေတော့ ပေါငျ ၇၅၀ လောကျပဲလေးမယျလို့ သိရပါတယျ။ အလေးခြိနျနညျးလလေေ အငျဂငျြအရုနျးရသကျသာလဖွေဈတာကွောငျ့ လောငျစာဆီလညျးပိုပွီးသကျသာမယျဆိုတာ အထူးပွောစရာမလိုပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ အာရုံခံစနဈတှေ၊ ကှနျပြူတာလမျးကွောငျးရှာစနဈတှကွေောငျ့ ကားပါကငျထိုးတဲ့နရောမှာလညျး အရငျကလို အခကျအခဲရှိမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။ ဒီအားသာခကျြကွောငျ့လဲ လောငျစာဆီသုံးစှဲရမှုကို လြှော့ခပြေးနိုငျပါသေးတယျ။ စဈတမျးတဈခုအရဆိုရငျ ကားအတှငျးမှာပါတဲ့လောငျစာဆီရဲ့ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးကို ကားပါကငျရှာဖှရေငျး ဖွုနျးတီးပဈနကွေတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ပတျဝနျးကငျြကိုလညျး အကြိုးပွုနိုငျတဲ့ မောငျးသူမဲ့ကား
အလိုအလြောကျမောငျးနှငျနိုငျတဲ့မောငျးသူမဲ့ကားတှဟော လမျးမပျေါမှာ ဘယျသူမဆိုငှားရမျးအသုံးပွုနိုငျတဲ့ စနဈကိုလညျး ဝနျဆောငျမှုပေးပါလိမျ့မယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ အလုပျကိုသှားမယျဆိုရငျ အိမျကကားဂိုဒေါငျထဲက ကိုယျပိုငျကားကွီးကို ထုတျမောငျးဖို့မလိုအပျတော့ပါဘူး။ လိုရငျးကတော့ အနာဂတျရဲ့ လမျးမတှပေျေါမှာ ယာဉျပေါငျးစုံနဲ့ ရှုပျယှကျခတျနတေော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရငျ လမျးမပျေါမှာ လမျးလြှောကျသူတှေ၊ စကျဘီးစီးသူတှနေဲ့ ပိုပွီးစညျစညျကားကားဖွဈလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ မောငျးသူမဲ့ကားတှမှောပါဝငျမယျ့ ထိနျးခြုပျစနဈဟာ လူသားဒရိုငျဘာတှထေကျ ပိုပွီးတိကပြါတယျ။ စနဈသာတကယျကောငျးရငျ ယာဉျတိုကျမှုဆိုတာ ဖွဈမှာမဟုတျတော့လို့ ကလေးငယျတှေ၊ လမျးလြှောကျသူတှနေဲ့ စကျဘီးစီးသူတှဟော စိတျအေးလကျအေးနဲ့ လမျးမပျေါထှကျနိုငျတော့မှာပါ။ ခရီးသှားပွညျသူတှအေားလုံးဟာလညျး လမျးမပျေါက မောငျးသူမဲ့ကားတှကေိုသာ အသုံးပွုစီးနငျးရတော့မှာဖွဈလို့ လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုကို ပိုမိုခြှတောပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
မောငျးသူမဲ့ကားနဲ့ပတျသကျပွီး အကောငျးမွငျတဲ့ဘကျက သုံးသပျဖျောပွခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဒီတဈခါတော့ အနာဂတျရဲ့ လောငျစာဆီပွဿနာကို မောငျးသူမဲ့ကားတှကေ ပိုပွီးဆိုးရှားလာစမေလားဆိုတဲ့ အခကျြကိုလညျး ဖွဈနိုငျခရြှေိ/မရှိ ဆကျပွီးစဉျးစားဖို့လိုလာပါတယျ။ ယနကေ့မ်ဘာကွီးမှာ ကားမောငျးခငျြတဲ့သူတှဟော လြော့နညျးမသှားဘဲ တဖွညျးဖွညျးပိုပွီးတိုးပှားလို့သာလာနပေါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့စညျးကမျးဥပဒအေရ အသကျ ၁၆ နှဈအောကျလူငယျတှေ၊ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ မသနျစှမျးတဲ့ဒုက်ခိတတှနေဲ့ ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့သူတှဟော ကားမောငျးခှငျ့မရှိပါဘူး။ မောငျးသူမဲ့ကားတှေ တှငျတှငျကယျြကယျြအသုံးပွုလာကွရငျတော့ ဒီလူတှလေညျး သကျသောငျ့သကျသာနဲ့ ဒီကားတှကေို တကျစီးနိုငျကွပါပွီ။ အဲဒီအခါမှာ ကားမောငျးသူ (သို့) ကားစီးသူအရအေတှကျဟာ လကျရှိထကျပိုလို့တောငျမြားပွားလာမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ပွညျတှငျးပို့ဆောငျဆကျသှယျရေးဟာလညျး ကှယျပြောကျသှားနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအစား မောငျးသူမဲ့ဘတျဈကားတှေ၊ မောငျးသူမဲ့တက်ကဆီတှကေိုသာ မွငျတှရေ့ဖို့ရှိပါတယျ။ မောငျးနှငျပို့ဆောငျပေးရမယျ့ self driving car တှမြေားလာလလေေ၊ လောငျစာဆီလိုအပျခကျြကလညျး ပိုပွီးမြားလာလလေေ ဖွဈမှာကတော့ သခြောနပေါတယျ။
လမျးမတှပေျေါမှာ မောငျးသူမဲ့ကားတှေ ပြားပနျးခပျအောငျလှုပျရှားသှားလာနပွေီး ပို့ဆောငျဆကျသှယျရေးကဏ်ဍအားလုံးရဲ့ ဦးတညျခကျြဟာလညျး မောငျးသူမဲ့ကားတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျ ဒီကားတှရေဲ့သကျတမျးကိုလညျး ပွနျလညျသတျမှတျပေးဖို့လိုလာပါလိမျ့မယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာ ကားတဈစီးရဲ့သကျတမျးကို ၁၁ နှဈသတျမှတျထားပမေယျ့ သုံးစှဲမှုသကျတမျးကို ၃ နှဈကနေ ၅ နှဈအတှငျးသာ သတျမှတျသငျ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါမှသာ လိုကျပါလိုတဲ့ခရီးသညျတှအေနနေဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ မောငျးသူမဲ့ယာဉျတဈစငျးကို စိတျအေးလကျအေးစီးနငျးနိုငျပါလိမျ့မယျ။ မောငျးသူမဲ့ကားတဈစီးဟာ သကျတမျး ၅ နှဈကြျောလှနျလာပွီဆိုရငျတော့ ဆကျလကျစီးနငျးဖို့မသငျ့ဘဲ လိုအပျတဲ့ပွုပွငျမှုတှေ၊ နညျးပညာအသဈနဲ့အညီ အဆငျ့မွှငျ့တငျမှုတှေ လုပျပေးရပါမယျ။ ဒီအခါမှာလညျး လောငျစာဆီသုံးစှဲမှုပမာဏက ဘယျလိုရှိမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးဖို့မလှယျသေးပါဘူး။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အခုဖျောပွခဲ့တာတှဟော အမရေိကနျက ကြှမျးကငျြတဲ့ပညာရှငျတှေ၊ သုတသေီအဖှဲ့အစညျးတှကေ အနီးစပျဆုံးလလေ့ာမှုတှသေုံးပွီး အနာဂတျအတှကျ စဉျးစားအဖွထေုတျခဲ့တာတှပေါ။ မောငျးသူမဲ့ကားတှနေဲ့ပတျသကျပွီး နောကျထပျထှကျပျေါလာနိုငျတဲ့အဖွတှေလေညျး အမွောကျအမြားကနျြရှိနနေိုငျပါသေးတယျ။ အနာဂတျရဲ့လောငျစာဆီ ပွတျလပျမယျ့အန်တရာယျကို မောငျးသူမဲ့ကားတှကေ အကူအညီပေးမှာလား …? ဒါမှမဟုတျ ပိုပွီးဆိုးရှားလာစမှောလား ဆိုတာကိုတော့ …။
Posted at: 14-05-2019 03:57 AM